'कोरोना संक्रमण भएका ९९ प्रतिशत मानिस निको हुन्छन्' | GNN Nepal GNN Nepal 'कोरोना संक्रमण भएका ९९ प्रतिशत मानिस निको हुन्छन्' | GNN Nepal
आत्मबल बलियो बनाउ कोरोना जितिन्छ । अधिकांश मानिस ठिक भएका छन् । त्यसका लागि पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनुपर्छ : डा. समीरमणि दीक्षित
कोरोना महामारी बढेको बढ्यै छ भनिन्छ यो सत्य हो ?
पछिल्लो कोरोना निकै संक्रामक देखिन्छ । बेलायतबाट आएको भेरियन्ट र भारतबाट आएको भेरियन्टका कारण पछिल्लो अवस्था अलि जटिल देखिन्छ । जसले अंकमा वृद्धि भएको छ ।
भनेपछि संक्रमण निकै भयावह छ ?
गत वर्षभन्दा जरुर भयावह छ । मान्छेहरुलाई धेरै समस्या भइरहेको छ ।
कोरोना बढेको छ त्यो सत्य हो तर जसरी घरमा बसिरहेका सर्वसाधारणहरुलाई डर, त्रास देखाउने भ्रामक सन्देशहरु आइरहेका छन् । तिनले उनीहरुको मानसिकतामा कस्तो असर गर्छ ?
यसबारेमा त म पहिलेदेखि नै बोल्दै आएको हो । नेपालका मूलधारका मिडियाहरुले जसरी कोरोनाको सन्दर्भमा सामग्रीहरु प्रेषित गरिरहेका छन् त्यो डरलाग्दो छ । रोगभन्दा समाचार सम्प्रेषण नै भयावह छ । रोग बढेको छ जरुर हो तर मृत्युदर बढ्यो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यो सत्य होइन । मृत्युको संख्या बढेको हो, कडा संक्रमितहरुको संख्या बढेको हो तर मृत्युदर बढेको होइन । यो पुष्टि भएको छैन ।
यस्ता समाचारहरु सम्प्रेषण गरेर जनतालाई डर, त्रास देखाउने काम सरासर गलत हो ।
यस्ता कुराहरुबाट बच्नका लागि होम आइसोलेसनका बसिरहनुभएकाहरुलाई तपाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
संख्या बढेको छ । यो संक्रमण दुई तीन गुणा बढी हानिकारक छ । तर कोरोना संक्रमणले नै सबैको मृत्यु भएको होइन । मृत्यु भएको समूह सबै दीर्घ रोगीहरुको हो । तर आत्तिने होइन । संयमित भएर बस्ने हो । यति भयो भने यो रोग मज्जाले जितिन्छ ।
कोरोना संक्रमण भइसकेका र घरमै बसिरहेकाहरुलाई यहाँको सुझाव के छ ?
कोरोना संक्रमण भएकामध्ये ९९ प्रतिशत मान्छेहरु निको हुन्छन् । कसैलाई अक्सिजन, कसैलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ला । तर हामी तथ्यांकलाई हामी काट्न सक्दैनौ । संक्रमित भइसकेकाहरु अवश्य घर फर्किनुहुन्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ । यदि कोही संक्रमित भइसक्नुभएको छ भने नआत्तिनुहोला । परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ । सँगै हुनुपर्छ भन्ने छैन । अलि दूरी कायम राखेर कुराकानी गर्दा हुन्छ । राम्राराम्रा समाचारहरु हेर्नुपर्छ । सकेसम्म सामाजिक सञ्जालबाट टाढै रहनुपर्छ । यस्ता समाचारहरु आधिकारिक मिडियाबाट आए मात्र विश्वास गर्नुहोला ।
आत्मबल बलियो बनाउ कोरोना जितिन्छ । अधिकांश मानिस ठिक भएका छन् । त्यसका लागि पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनुपर्छ । प्रशस्त हावा आउने ठाउँमा बस्नुपर्छ । किताब पढ्ने । विभिन्न खालका मनोरञ्जनात्मक कुराहरु हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
संक्रमित भइसकेपछि कस्तो अवस्थामा अस्पताल पुग्ने कस्तो अवस्थामा घरमै बसेर उपचार गर्ने ?
त्यसका लागि घरमै अक्सिमिटर राख्नुहोला । अक्सिमिटर भनेको अक्सिजनको मात्रा मापन गर्ने सानो यन्त्र हो । बजारमा यसलाई २ हजार जतिमा लिन सकिन्छ । त्यसमा नियमित रुपमा आफ्नो अक्सिजन जाँच गर्नुहोला । स्वस्थ मान्छेको अक्सिजन जहिलेपनि ९६ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुन्छ । अलि बिरामी भएको मान्छेको अक्सिजन ९२ देखि ९६ को बीचमा हुन्छ । भाइरसले अलि बढी रुप लिन थाल्यो भने अक्सिजनको मात्रा ९२ बाट झर्न थाल्छ । त्यसपछि चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने र कोभिड अस्पताल गइहाल्ने ।
यसको मुख्य लक्षण ज्वरो, रुघा सास फेर्न गाह्रो, वास्ना थाहा नपाउनु हुन् । कतिपयलाई पखाला हुन्छ । कुनैपनि लक्षणको शंका लागेमा अस्पतालमा पुगिहाल्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक अवस्था वृद्धि गर्न कस्ता खानेकुरामा ध्यान दिनु उचित हुन्छ ?
पौष्टिक आहार खाउँ, फलफूलहरु खाउँ । मासु खानुहुन्छ भने सीमित मात्रामा खानुहोला । दूध, पानी लगायतका कुरा पनि खाउँ । यस्तो अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन नगरौं । यदि खाने नै गर्नुभएको छ भने त्यसको मात्रा मिलाएर खानुहोला । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिका लागि ठ्याक्कै यही खानेकुरा उचित भन्ने कतै उल्लेख छैन ।
यो महामारी कहिलेसम्म कायम रहला ?
यो महामारी देशअनुसार हुँदोरहेछ । तर उत्कर्षमा पुगेको कुरा झरेरै छोड्छ । पूर्ण जनसंख्याले खोप नलगाएसम्म कोरोना रइरहन्छ ।
फोनमा बोल्दा सास फेर्न कष्ट हुन्छ, म्यासेज गर्नुहोला : शान्ता चौधरी
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद्मा जिते विश्वासको मत
फागुन २३ गते, २०७७
काठमाडौंमा पहिरोले पुरिएर एक जनाको मृत्यु